75 နှစ်သစ်ကူးအင်တာနက်ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၀၁၁ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 20, 2010 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 24, 2015 Douglas Karr
နှစ်ကုန်ဖို့အချိန်တန်ပြီ ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပျက်စရာတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်၊ ကုမ္ပဏီကြီးအနည်းငယ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လက်မခံနိုင်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့အပြုအမူကိုခံလိုက်ရတယ်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်အမှားအယွင်းများသောအရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်သူတို့မဖြစ်နိူင်စေရန်ပြင်ဆင်ကြရအောင်။
ရပ်တန့်။ သငျသညျရှိသကဲ့သို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံ, သင်၏လက်ချောင်းများကို CAPS သော့ခတ်ထားပါ။
မင်းရဲ့အီးမေးလ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရင်၊ မပို့ပါနဲ့ အတည်ပြုအီးမေးလ် ငါ့အတွက်
၏ပုံကိုအစားထိုးလိုက်ပါ ကြက်ဥ တွစ်တာမှာမင်းရဲ့ပုံရိပ်အမှန်နဲ့အတူ။ ၃ လကြာပြီးပြီ။
မပို့ပါနဲ့ ပြန်လည်စတင်သည်။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းတောင်မှမချပါနှင့်။ ငါတို့ပြီးပြီ LinkedIn တို့ အခု ၈ နှစ်လောက်သုံးပါ။
သင်က fit မနိုင်လျှင် 140 ဇာတ်ကောင်အီးမေးလ်ပို့ပါ
သင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်မဖတ်နိုင်လျှင်2စက္ကန့်, ဖုန်းဆက်ပါ။
ငါမက်ဆေ့ခ်ျချန်ထားပါ အီးမေးလ်က မင်းပြန်လာပြီ
ကျော်လွှား! ယနေ့ခေတ်တွင်၎င်းသည်နည်းလမ်းများစွာကိုမြင်နေရပြီ။ မှ Carissa နယူတန်.
Apple - တီထွင်မှု ဖန်သားပြင် သန့်ရှင်းတဲ့သုတ်လိမ်းစရာမလိုပါဘူး (သို့) သင့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကီးဘုတ်ပြန်ထည့်လိုက်တာမလိုပါဘူး။
အကြိမ်ကြိမ်ငါ့ကိုမေးခိုင်းတာကိုမရပ်တန့်ပါနဲ့ အစည်းအဝေးတစ်ခုစီစဉ်ပါ။ ငါ့သုံးပါ ရှုပ်ထွေး!
အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ပါ ဓာတ်ပုံအဟောင်း avatars တွေလို၊ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးမင်းဟာမင်းနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ လူကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်အမေနှင့်ဘာကြောင့်စကားပြောရတာလဲဟုတွေးမိလိမ့်မည်။ အခုအဆင်ပြေတယ်။ အခုလည်း ၀ မ်းနည်းနေပြီ။
ရပ်တန့် ဘဲမျက်နှာ။ သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကိုသူသုံးနေသည်ကိုသင်တွေ့သောအခါလူမြင်ကွင်းတွင်သူတို့ကိုလှောင်ပြောင်သင့်သည်။ သူတို့ဘယ်လောက်မိုက်မဲတယ်ဆိုတာသိသွားရင် ၂ နှစ်အတွင်းသင့်ကိုသူတို့ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။
ဟေ့ Google ... မင်းသတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူး SEO လုပ်ငန်း စျေးကွက်တွင်အလျင်အမြန်ကြီးထွားနေသောစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့ algorithm မှာတစ်ခုခုမှားနေတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာကကုမ္ပဏီတွေကအဲဒါကိုကိုင်တွယ်ဖို့သန်းပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတယ်။ အဲဒါကိုလျစ်လျူရှုပါ
geeks အတွက်စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ဖို့သင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်သင်သိုလှောင်ထားပါ 2XL မှတဆင့် 5XL ရှပ်အင်္ကျီများ။ ဒီအလောင်းတွေကို P90X ကမရခဲ့ဘူး၊ သူတို့ကိုဘလော့ဂ်လုပ်တာကနေရခဲ့တယ်။
ငါ့ကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ဝင်ခွင့်မပြုပါ မှာယူမှုဖျက်။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကကျွန်ုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်သင်နှစ် ဦး စလုံးကကျွန်ုပ်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ပျောက်ဆုံးသည်ကိုသိပါသည်။ မင်းရဲ့ site ကိုငါမကြည့်သေးဘူး - အပတ်တိုင်းအီးမေးလ်ပို့တာကအကူအညီမပေးဘူး။
တစ်စုံတစ်ယောက်ပေးပါ WYSIWYG text editor တစ်ခုကို ဒါကတကယ်ကောင်းပါတယ် အကယ်၍ HTML5 သည်ဗီဒီယိုကိုထည့်နိုင်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဘယ်အယ်ဒီတာမရှိနိုင်သနည်း။
တစ်စုံတစ် ဦး အားကူညီခြင်း (သို့) နောက်ဆက်တွဲမရှိသောအရာများကိုမြှင့်တင်ရန်အွန်လိုင်းတွင်ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းများကိုရပ်ဆိုင်းပါ။ မှ မေီ Stark.
ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ အစိုးရမည်သည့်အစိုးရမဆိုအင်တာနက်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအရာကတကယ်တော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရတွေကအဲဒါကိုမထိခဲ့ကြဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ကြော်ငြာကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူထည့်ပါကနားလည်ပါ ကျော်သွား link ကိုငါပဲကြော်ငြာကိုကျော်သွားပြီ နှင့် သင့်ထုတ်ဝေမှု
မင်းအကြောင်းမင်းကိုပြောပြပါ iPhone အက်ပလီကေးရှင်း။ ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူး၊ ငါတို့အားလုံးမှာ Droids ရှိတယ်။
အတွက်ကုမ္ပဏီများအကဲဖြတ်ကိုရပ်တန့် သန်းပေါင်းများစွာ သူတို့ကနှစ်အနည်းငယ်အရွယ်နဲ့အမြတ်အစွန်းမရတဲ့အခါ။ သူတို့ကမထိုက်တန်ဘူး၊ ဘယ်သူမှမပေးသင့်ဘူး။ အကယ်၍ သူတို့ကသင့်ကိုဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံကမ်းလှမ်းလာရင်လူထုံမဖြစ်ဘဲကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းဆန်ပါ။
အစား တစ်စုံတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းခြင်း သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲမည်မျှကြီးကြောင်းပြောဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမျက်နှာသာပေးပြီးသူကပြောတယ်ဆော့ဝဲလ်ကိုအစားထိုးပါ။ မင်းနောက်အဆိုတော်နောက်ကွယ်မှမင်းဟာမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပုံတစ်ပုံကိုရပြီ။ ငါတို့မှာ ၄ နှစ်တာကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောထိုအမှားအယွင်းကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်။ မမျှတဘူး
ကျွန်ုပ်၏သမီးကသူမ၏ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွင်မှတ်ချက်ပေးခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်သူမကိုရိုက်နှက်ရန်ကြိုးစားသောယောက်ျားများကိုခြိမ်းခြောက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ငါစဉ်းစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ငါစဉ်းစား ... nope ။
ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိများကကုမ္ပဏီများအားဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုပါနှင့် ဂျင်းဘောင်းဘီဝမ်းခွဲ နှင့်ကောင်းဘွိုင် ဦး ထုပ်တစ်ခု၊ ရုံးခန်းနေရာကောင်း၊ သုံးစွဲသူတိုးတက်မှု (သို့) VC ပိုက်ဆံ ... ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ လာမယ့်လူကြိုက်များတဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ကောင်းဘွိုင် ဦး ထုပ်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါအသုံးပြုသူတွေမကြာခင်မှာဘယ်လောက်မြန်လာမယ်ဆိုတာကုမ္ပဏီတွေကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
ငါလိုဘလော့ဂါတွေကိုဆက်လုပ်ပါ ကစားစရာအခမဲ့ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဟန်ဆောင်၊ အရေးကြီးမှုကိုပြုမူပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ် သြဇာ။ အိုင်ပက်များကိုကြိုဆိုသည်။
က c / o DK New Media
120 E ကို Market က St, Suite 940
Indianapolis, IN 46204 ။
အချို့လူများကအင်တာနက်ပေါ်တွင်စာမဖတ်တော့ပါ။ စတင်ပါ podcast တခုကိုလုပ်ပါ ဗီဒီယို…အသုံးပြုပါ ကွဲပြားခြားနားသောနတ်ကတော် ကွဲပြားခြားနားသောပရိသတ်များရောက်ရှိဖို့။
Search professional - လူတိုင်းကိုမပြောပါနဲ့ လူမှုရေးယူတာပဲ ပြီးတော့သူတို့ပိုက်ဆံအားလုံးကိုရှာဖို့လိုတယ်။
လူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူများ - လူတိုင်းကိုမပြောတော့ပါ ရှာဖွေတာပါ ပြီးတော့သူတို့ငွေအားလုံးကိုလူမှုရေးမှာသုံးသင့်တယ်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ရည်ရွယ်ချက်သုံးရပ်ကိုဆောင်ရွက်သည်။ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်း။ သင်သူတို့ထဲကအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ကိုမေ့သွားတယ်မဟုတ်လား။
သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ထက် ၁၀ ဆကုန်ကျသောရုံးများရှိသည်။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှမမေးခဲ့ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ သားရေအိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်နေတာ၊ မင်းရဲ့အွန်လိုင်းရုံးခန်းကနေမထွက်တော့ဘူး ပိုက်ဆံဖြုန်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်, သင်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ် - ငါကတိ။
ဘယ်လောက်အကြောင်းပြောနေတာကိုရပ်တန့် နေပြည်တော် မင်းရပြီ စီးပွားရေးကိုဒေါ်လာနှင့်ဆင့်ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ သင်ဖောက်သည်များကိုပေးဆောင်ခြင်းမပြုတော့ပါကသင်၏နည်းဗျူဟာမှာပျက်နေပြီ။
ရာနဲ့ချီပြီးပိုများတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲဆုံးသော့ချက်စာလုံးကိုနံပါတ် ၁ ဖြစ်အောင်မကြိုးစားပါနဲ့ သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများ ဒါကသင်၏ကုမ္ပဏီဆီကိုစီးပွားရေးကိုမောင်းထုတ်လိမ့်မယ်။
ကြိုးစားကြိုးစားပါ နိုင်ငံတကာအဆင့်သတ်မှတ် သင်၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းသည်သင်၏ရုံးမှ ၂၅ မိုင်အတွင်းတွင်ရှိသည်။ Maui ရှိမည်သူမျှသင်၏နေ့လည်စာအထူးကိုသင်ဂရုမစိုက်ပါ (သင် Maui တွင်မရှိလျှင်) ။
မဟုတ်ပါ၊ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မည့် application သည်၎င်းကိုလုံးလုံးလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အရောင်းဝန်ထမ်းပြောသည့်အတိုင်းပင်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နှင့်အတွက်ကတိထားတော် features တွေ လာမည့်ဖြန့်ချိ? သူတို့လည်းလာမလာကြဘူး
အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာငှားပါ အတိုင်ပင်ခံ သင်ကြွင်းသောအရာကျွမ်းကျင်ဖို့ကူညီအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ။
ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ဝယ်ပေးပါ Yahoo က! ပြီးသား?!
မင်းငါ့ကိုနဲ့ငါအီးမေးလ်ပို့ရင် မတုံ့ပြန်ဘူးကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကို tweet၊ Facebook စာ၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့။ ကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောရန် ၀ င်းဒိုးကိုမဖွင့်ပါနှင့်။ ငါ ဦး စားပေးရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ငါတုန့်ပြန်တာမဟုတ်ဘူး။
Facebook က developer များ ... fricken interface ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင်တစ်ယောက်တည်းထားနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု?
သင်ဟာ Hooters ကိုသွားတဲ့သူတွေကိုလှောင်ပြောင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကဒိုမိန်းတွေကိုဝယ်ပါလိမ့်မယ် GoDaddy? တကယ်လား
အကယ်၍ သင်သည်ဗားရှင်း ၁ ထက်ကျော်လွန်ပါကသင်မဟုတ်ပါ beta ကို တော့ဘူး။ သင်၏ crappy developer များကိုကျိုးပဲ့သော crap အတွက်ဆင်ခြေပေးရန်ကြိုးစားနေသည်။
သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စီမံကိန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောဘတ်ဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဘတ်ဂျက်တွင်ထည့်ပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။
ဝေးကနေခြေလှမ်း flash ကို။ တည်ငြိမ်နေတုန်းမှာအေးအေးဆေးဆေးပဲ။ ကာတွန်းသမားတွေနဲ့ဂိမ်းဖန်တီးသူတွေအတွက်ထားခဲ့တာ။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးက HTML5၊ Ajax နဲ့ CSS တို့ဖြစ်သင့်တယ်။ (@jenniedwards ငါ့ကိုအပေါ်ကြီးစွာသောဆောင်းပါးပေးပို့ခဲ့သည် Flash နဲ့ Flash.)
ငါ့ကိုဘယ်လောက်ဆုံးဖြတ်မလဲ ပရိသတ်တွေနဲ့နောက်လိုက်တွေ ငါ့မှာရှိတယ်။ နင့်ကိုစောင့်နေနိုင်ဖို့သင်ငါ့ကိုအခွံမာတွေမောင်းနေတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာမင်းရဲ့လက်မှုအနုပညာကိုမင်းကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့သင်အကြိုက်ဆုံးဘလော့ဂ်ဂါတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ စာအုပ်။ သွားဝယ်ပါ၊ မင်းလုပ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးပဲ။ 😉
ငါတို့အားလုံးအလေးအနက်ထားတက်ရောက်ရန်စီစဉ်နေပါသလား SXSW ပါတီပွဲတစ်ခုနှင့်တစ်ပတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးကျဆင်းသွားခြင်း?
မင်းကမင်းပါ သတင်းစာဆရာကြီးသင်၏မီဒီယာကုမ္ပဏီကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်။ ဤတွင် ထွက်၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေရှာခြင်း၊ အယ်ဒီတာဟောင်း (သို့) ထုတ်ဝေသူအဟောင်းများကသင်၏အကြောင်းအရာများကိုမခွဲမခွာပြုလုပ်ပါ။ တကယ်လို့သာသူတို့သာကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအိမ်သာထဲကိုကျမှာမဟုတ်ဘူး။
လူမှုမီဒီယာနှင့် အွန်လိုင်းစျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံ Amish မဟုတ်ပါ သင်တတ်နိုင်လျှင်ပြန်ပေးပါ။ သူတို့ကိုပြန်မဆပ်ပါနှင့်။ ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များအတွက်ကုန်သွယ်သောကော်ဖီတစ်ခွက်သည်ငှားခကိုမပေးချေ။
search engine optimization ကွန်ရက်စာမျက်နှာအဆင့်ဆင့်၊ စာမျက်နှာဒီဇိုင်း၊ အကြောင်းအရာပိုကောင်းအောင်နှင့်ပြင်ပတွင်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုအရာအားလုံးကိုမရရှိပါက SEO ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
သင်စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုရင် လူမှုမီဒီယာသင်၏စီးပွားရေးကွန်ယက်ကိုအမှန်တကယ်သင်လုပ်ရန်ရှင်းလင်းသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးသလား။ (ဆိုလိုသည်မှာ Call to Action, Landing Page, Form စသည်ဖြင့်)
ဂျက်စတင်ဘီဘာဖြေ - မင်းရဲ့ ၁၅ မိနစ်ကျော်ကျော်ကျော်ကြားမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ ၈ လတုန်းကပေါ့ သွားပြီး…သင့်ဆံပင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြုတ်ပါ။
လူများစွာသည်သင်၏ site ကိုသင်၏ site ပေါ်တွင်ဖတ်နေကြသည် မိုဘိုင်း device ကို။ သင်၏ site သည်မိုဘိုင်းစက်ပေါ်တွင်ပင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။ iPhone, iPad, Droid နှင့် Blackberry အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်ခုခုကိုမဖန်တီးခဲ့ပါကလူတိုင်း၏ဘောလုံးကိုအားမဖြည့်ပါနှင့် ဝေဖန် သူတို့ပြီးပြီဘယ်အရာကို
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များကိုအမှုအရာများလုပ်ဆောင်စေခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ Internet Explorer ကို 6။ ကျိုးပဲ့မလုံခြုံတဲ့ဘရောင်ဇာကိုသင်ထောက်ပံ့နေရုံသာမကသင်သည်အရက်နှင့်သတ်သေနှုန်းကိုပါကူညီပေးနေသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, တကယ်တော့တစ် ဦး ကိစ္စသကဲ့သို့ငါ / ဖြစ်ခဲ့သည် / ဖြစ်လိမ့်မည် အလုပ်ရှုပ်သည်.
လူတွေကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဖို့ခက်ခဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့ စုစုစည်းစည်း သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာ။ သူတို့မှာ ၀ န်ထမ်း ၃ ယောက်ရှိပြီးစာဖတ်သူ ၅၀,၀၀၀ ရှိတယ်။
ဖေဖေ၊ ကျွန်တော့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ကစပြီးဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့ညာဘက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအီးမေးလ်များကိုဆက်မပို့ပါနှင့် Snopes။ အဆိုပါ NSFW လှပသောအမျိုးသမီးများ၏ဓာတ်ပုံများမှာအဆင်ပြေနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်၏သားကိုချစ်လော့။
သင်ဆဲနေလျှင် popover / popunder ကြော်ငြာနှင့်အတူပြတင်းပေါက်များ၊ မင်းဟာစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေပြီးအွန်လိုင်းမှာငွေရှာလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပါသည်။ စာအုပ်ဆိုင်ရောင်းပါ။
မင်းကိုသူငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်မတောင်းပါနဲ့ Foursquare မင်းကတိုက်ကြီးတစ်ခုတည်းမှာမနေဘူး၊
ကျေးဇူးပြုပြီးဂူဂဲလ်ပေးပါ API ကို Webmasters ပေါ်မှာဒါငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာထူးခြေရာခံ မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးပေါ်တွင်။ ငါတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာငါတို့သိတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့လုပ်နေတယ်။ အဲဒါကျော်ယူပါ
အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ iPhone4ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာကအေးမြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယခု Droids တွင်တူညီသောအက်ပလီကေးရှင်းများရှိပြီး၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြီးစီးနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်ပါတယ် အိုင်ပက် ယခုနေ့လည်စာအစည်းအဝေးမှာအေးမြကြည့်ရှုရန်။ (နံပါတ် ၂၆ ကိုကြည့်ပါ)
တွစ်တာ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ငါတို့စာမျက်နှာနှင့်ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာအား Analytics ကိုတင်ခွင့်ပြုပါ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကုဒ်များ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူဒိုမိန်းအစုတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုမဆို။ တွစ်တာမှအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ၀ က်ဘ်ရည်ညွှန်းမှုများနှစ်ခုလုံးတွင်စစ်မှန်သော ROI ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။
အားလုံးဆော့ဖ်ဝဲ developer များရန်။ အားလုံးနီးပါးလုပ်နိုင်လို့ အလိုအလျောက် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ၁၆ နာရီတိုင်းမှာဗားရှင်းအသစ်ထုတ်လွှတ်တယ်လို့မဆိုလိုဘူး။
မိုက်ကရိုဆော့ (ဖ်) - ကုမ္ပဏီများအားလုံး Bing (သို့) Microsoft.com အသုံးပြုခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားပြီးနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမရှိသောအခါ Microsoft ထုတ်ကုန်များ၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအားလုံးကိုပိတ်ပင်ပါ။ Internet Explorer ကို ပြေး။ (ထိုချွင်းချက်နှင့်အတူ Internet Explorer ကို စာမျက်နှာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ။ )
၀ က်ဘ်ဆိုက်ရေးသားသူအားလုံး - ကျေးဇူးပြု၍ Internet Explorer ဗားရှင်းအားလုံးကိုဗားရှင်း ၈ ထက် နည်း၍ ပိတ်ဆို့ပြီး၎င်းတို့ download လုပ်နိုင်သည့် link တစ်ခုပေးပါ Chrome, Firefox, Safari သို့မဟုတ် Opera ပင်ဖြစ်သည်။ ဘာမှတစ်ခုတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Apple က - ရှုပ်ထွေးမှုကိုရပ်တန့်ပြီးထားပါ iPad ရှိကင်မရာ ရှိပြီးသား အဆင့်မြှင့်တင်ရောင်းအားနို့ဖြတ်။
ကြီးစွာသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သောအွန်လိုင်းလူများကိုဖုန်းခေါ်ပါ ရော့ခ်ကြယ်ပွ။ သူတို့ဟာ Rock Stars မဟုတ်ပါ။
Foursquare: မည်သို့ပင်နည်းလမ်း Gowalla အနီးဆုံးနေရာကိုရှာဖို့အသုံးပြုတယ်၊ ငါသည်သင်တို့၏ app ကိုရှာဖွေရှာဖွေနေနေပါတယ်။
ယုတ္တိရှိပုံရသည်ကိုသင်သိသည်။ သင်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပြီးသင်တုန့်ပြန်မှုအလွန်ကောင်းသည်။ နောက်ထပ်အီးမေး (၂၆) လုံးကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းကသင့်အား ၂၆ ဆပိုရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ တုံ့ပြန်မှုနှုန်း။ ငါကတိပေးတယ်။
မင်းရဲ့ ၃ နှစ်သက်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောတတ်တာကိုလျှော့ပါ ChaCha။ ကျနော်တို့ကသို့လှည့်ပါတယ် အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာ site ကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ Plus အား Scott နှင့်သူ၏အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တကယ်ကိုကြီးစွာသောရှေးရှေးဖြစ်ကြသည်။
ဂူဂဲလ် - ပေးကမ်းခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါ Google Analytics အလကား။ မည်သူမျှ၎င်းကိုစနစ်တကျမသုံးစွဲတော့ပါ။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ကိုတကယ့်ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခဲ့သည် analytics ကုမ္ပဏီပေးနိုင်ဘူး။
အကယ်. သင်က ရှိ ရရန်အတွက်သင်၏ရပ်ရွာလူထုအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ထို့နောက်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်း၏ကြီးထွားမှုကိုဖော်ပြခြင်းသည်ရောထွေးသည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနအားမည်သို့ပင်ဖြစ်စေမြှင့်တင်ပေးပါ။
ဘယ်လောက်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအများကြီးပြောတာကိုရပ်လိုက်ပါ ကုမ္ပဏီအချို့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမှုမီဒီယာ၏လုပ်နေတာနေကြသည်။ သူတို့ကလူမှုမီဒီယာရှေ့တော်၌ကြီးသောခဲ့ကြသည်!
လွယ်ကူတဲ့ပြင်ဆင်ချက်မရှိပါဘူး စျေးကွက်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ န်ဆောင်မှုများပိုများလာသည်၊ အချိန်နည်းပါးသည်။ ဒါဟာမာရသွန်ပြေးတာမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်သွားပြီးဒီကင်လုပ်ခိုင်းကိုမဖတ်ပါနှင့်
Tags: 20112011 ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ
pc ကျန်းမာရေးအကြံပေးလိုင်စင် key ကို
24:2011 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 01
ဟမ်ဒီမှာအသုံးဝင်သောအကြံအစည်တွေအများကြီး။ ကောင်းပြီ, ငါဒီမှာငါ့အဖြေကိုအတော်လေးနောက်ကျဒီမှာဆိုတဲ့အချက်ကိုငါသိ၏ပေမယ့်ငါကဒီပို့စ်အားဖြင့် enter ည့်ခံခဲ့သည်ငါ့ကိုသင်နှင့်အတူစတင်ရန်အတွေးအခေါ်များအများကြီးပေးသည်ကိုသင်သိစေချင်တယ်။ ဒါကဒီ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့အင်တာနက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပဲ။